Nhengo dzeZINASU Nhanhatu Dzinosungwa kuMasvingo
Gumiguru 09, 2021
Mutungamiri weZINASU VaTakudzwa Ngadziore ndemumwe wevadzidzi vanonzi vasungwa nemapurisa kuMasvingo.
Nhengo nhanhatu dzesangano revadzidzi vemuzvikoro zvepamusorosoro, reZimbabwe National Students Union, ZINASU, dzinonzi dzasungwa mangwanani eMugovera kuMasvingo uko dzanga dzichiita musangano wadzo weGeneral Council pane imwe hotera.
Vadzidzi vanonzi vasungwa vanoti mutungamiri weZINASU, VaTakudzwa Ngadziore, mutungamiri wevadzidzi vepaUniversity of Zimbabwe, VaLennox Machoko, Muzvare Paidamoyo Masaraure, Muzvare Nancy Njenge, VaAllan Chipoyi pamwe nemumwe mudzidzi angonzi Calvin.
Sachigaro weZINASU paMidlands State University, VaBoris Muguti, vanoti musangano wavo wanga wakatanga zvakanaka chose, asi vazokanganiswa pakutanga nevanofungidzirwa kuti vasori vapinda mavanga vachiitira musangano wavo.
Vanoti pashure vazonzwa kuti mapurisa anodzivirira mhirizhonga anga ave munzira kunoparadza musangano uyu, izvo zvaita kuti vamwe vevadzidzi ava vatize vachinozvivharira mudzimba dzekurara, vamwe vachizosungwa pasvika mapurisa aya, ayo anonzi anga achimanikidza vashandi vepahotera iyi kuvhura magonhi kuti vasunge vadzidzi ava.
Vasungwa ava vanonzi vaendeswa kukamba yemapurisa yeMasvingo Central uye pataenda pamhepo tanga tisati tanzwa kuti vari kupomerwa mhosva ipi.
Studio 7 yakundikana kubata mapurisa epaMasvingo Central kanawo mutauriri wemapurisa, Assistant Commissioner Paul Nyati kuti tinzwe divi remapurisa panyaya iyi.
Asi VaMuguti vanoti vanofunga kuti kusungwa kwenhengo dzesangano ravo kuda kungoshungurudza vadzidzi chete sezvo vanga vachitevedzera mitemo yose yekudzivirira Covid-19.
Hurukuro naVaBoris Muguti